နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁၉- ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံ၊ ဒုတိယသမ္မတ H.E.Mr. Vincent Merition ဦး ဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ နေပြည်တော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ် တော်၊ သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးဟန်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွား ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချမ်းအေး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းသိမ်းတိ်ု့ တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး၊ ဧည့်သည်တော် များဘက်မှ ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ H.E.Mr. Vincent Merition, Mr.Nico Barito (Envory of the President of Seychelles for ASEAN), Mr. Steven Japutra(Seychelles Finanical Service Authority Representative to ASEAN), Mr. Jordy Akhmad Pratama (Program Coordinator of Seychelles to ASEAN), Mr. Irwan Herdiansyah(Protocol Assistant of Seychelles to ASEAN) တို့မှ တက်ရောက်တွေ့ ဆုံခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံသည် အရှေ့အာဖရိကကမ်းလွန် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်း တည်ရှိသည့် လှပသောကျွန်း စုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကျွန်းစုပေါင်း ၁၁၅ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံဖြစ် သည်။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် လူဦးရေသန်း ခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေကိုး သောင်းကျော်ရှိကာ ကမ်းခြေအလှ အပများကြောင့် လူသိများသည့် ကျွန်း စုနိုင်ငံလေးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ မြန်မာနှင့် ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံတို့သည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် သံတမန် ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆက်ဆံ ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁၂၁ နိုင်ငံ မြောက် သံတမန်ဆက်သွယ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ H.E.Mr. Vincent Merition နှင့်အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး ယင်းဒုတိယသမ္မတနှင့် အဖွဲ့ကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီး ယူနှင့် ဇနီးဒေါက်တာရွှေလွှမ်းတို့က နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ် ၌ ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁၁၃ သန်းကျော် ဆိုးရွားသည့်အငတ်ဘေးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်